ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့် နီပေါနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Bhim K. Udas အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
Post date: 08/16/2017 - 20:18
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်သည် နီပေါနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Bhim K. Udas အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Post date: 08/02/2017 - 19:20
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး (၃၇)ရက်မြောက်နေ့ကျင်းပ
Post date: 08/02/2017 - 18:29
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး(၃၇)ရက်မြောက်နေ့ကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ကျင်းပရာ မိတ္ထီလာမဲဆန္ဒနယ်မှ ဒေါက်တာဦးမောင်သင်း၏ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပညာရေး ဝန်ထမ်းများအားလုံးအား နှစ်စဉ်ဝတ်စုံစရိတ် ချီးမြှင့်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
မီဒီယာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
Post date: 07/27/2017 - 18:29
မီဒီယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့နှင့် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်နှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာ ကောင်စီအပါအ၀င် သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့အစည်း များမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန စုပေါင်း အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ကာတာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr Hassan Bin Mohamed Rafei Al-Emadi အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Post date: 07/25/2017 - 09:12
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်သည် ကာတာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr Hassan Bin Mohamed Rafei Al-Emadi အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရုပ်ရှင်ပွဲတော် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပနိုင်ရေး အငြိမ့်ပြိုင်ပွဲများ၊ ပဒေသာကပွဲများတွဲဖက် ကျင်းပသွားမည်
Post date: 07/22/2017 - 19:07
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဖျော်ဖြေရေး အနေဖြင့် အငြိမ့်ပြိုင်ပွဲများတွဲဖက်၍ ထည့်သွင်းကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအငြိမ့်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ ပြုလုပ်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှ သိရသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်နှင့် မစ္စယန်ဟီလီ သတင်းမီဒီယာဆိုင်ရာကိစ္စ ရပ်များ ဆွေးနွေး
Post date: 07/22/2017 - 08:21
ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ ဆိုင်ရာ အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူ မစ္စယန်ဟီလီအား ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်သည် ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည်
Post date: 07/18/2017 - 22:49
Post date: 07/16/2017 - 21:36
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး မြစ်ကြီးနားမြို့၌ တိုက်ပွဲရှောင်မိသားများစု များအား တွေ့ဆုံအားပေးပြီး ၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
Post date: 07/15/2017 - 19:54
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်သည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနား လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိပြီး လေဆိပ်ခန်းမ၌ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာခက်အောင်၊ ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးကြသည်။